"Room No. 9” ကိုရီးယား ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ
ကိုရီးယား ဒရာမာတွေထဲမှာ ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းက အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်မယ့် ဒရာမာ အသစ်ကတော့ အလားတူ ဒရာမာတွေထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုံစံနဲ့ မတူကွဲပြားရပါစေမယ်လို့ ကတိပြုထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တို ဘာလ ၂ ရက်နေ့၊ ဆိုးလ်မြို့ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တခုအတွင်း “Room No. 9” လို့ခေါ်တဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဒရာမာ ထုတ်လုပ်သူ Ji Young Soo က အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဝိညာဉ်ချင်းပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကြောင်း ဖြစ်ပေမယ့် အခြား ဒရာမာတွေမှာမြင်တွေ့ရသလို အဓိကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေက မတူတဲ့အကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“Room No. 9” ဒရာမာမှာတော့ ငယ်ရွယ်ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ရှေ့နေ အဖြစ် မင်းသမီး Kim Hee-sun နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ရခြင်း မရှိခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်နှစ် ၃၀ ကျော်ကျခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးအဖြစ် မင်းသမီးကြီး Kim Hae-sook တို့က ဦးဆောင်ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
ထောင်ကျခံနေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ထောင်ဒဏ်ကို လျှော့ရက်ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေစဉ်မှာ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဝိညာဉ်က အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ထောင်ကျနေတဲ့သူရဲ့ ဝိညာဉ်က ထောက်ကနေ လွတ်သွားခဲ့ပြီး သူထောင်ကျခံခဲ့ရတဲ့ အမှုရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရှေ့နေတဦးအဖြစ် ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ ရှေ့နေဖြစ်သူကတော့ ထောင်ထဲရောက်သွားပြီး အပြင် ရောက်သွားတဲ့ ထောင်ကျခံအမျိုးသမီးကို အပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဝါရင့်မင်းသမီးကြီး Kim Hae-sook ကတော့ အခုဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင်နှစ်မျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အသက် ၄ဝ အရွယ် မင်းသမီး Kim Hee-sun ကတော့ သူ ဒီဒရာမာကို လက်ခံဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတခုက ပထမဆုံး ဇာတ်ရုပ်နှစ်မျိုး သရုပ်ဆောင်ရမယ့်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလိမျိုး Kim Hae-sook လို စီနီယာသရုပ်ဆောင်မျိုးနဲ့ အလုပ်အတူတူ လုပ်ရတာ ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ယူရမှုဖြစ်သလို တချိန်တည်းမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မင်းသား Kim Young-kwang ကတော့ မှားယွင်းစွာ ထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ နောက်ကွယ်က ထူးဆန်းမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် အဓိကသော့ချက်ကို ကိုင်ထားတဲ့ ဆရာဝန် Ki Yoo-jin အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်မယ့် အဲဒီဒရာမာကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့ကစလို့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Topics: "Room No. 9”, ဇာတ်လမ်းတွဲ